ရှညောသား: June 2015
မလွတ်တမ်းမှာတဲ့အထိပါပဲ။သူတို့ချက်တာကတော့အုန်းနို့နဲ့ငါးအသားမွထည့်ကြတာများတယ်။ငါးအနံ့ကိုမ မကြိုက်သော်လည်းအုန်းနို့ဆိမ့်ဆိမ့်လေးလေးနဲ့မို့စားလို့ဝင်ပါတယ်။သူတို့ချက်တဲ့စတိုင်အတိုင်းလိုက်ချက်ဖို့ စဉ်းစားနေပေမဲ့အခုထိတော့အကောင်အထည်မဖော်ရသေးဘူး။၀ယ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်စတိုင်ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, June 28, 20150comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဖ ဦးထုပ်စတိုင်အကြော်မှုန့်နဲ့ဗူးသီးကြော်စမ်းကြော်ကြည့်တာမြန်မာအရသာမဟုတ်ပေမဲ့ကြော်ရတာအဆင် ပြေပါတယ်။သူတို့ကတော့ဒီအကြော်မှုန့်ကိုကြက်သား၊ပုစွန်နဲ့ကင်းမွန်(ရေဘ၀ဲ)ကြော်ရာမှာအဓိကထားသုံး ကြပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူငရုတ်ကောင်းဆားနဲ့အရသာမှုန့်စတာတွေပါရောစပ်ထားတာမို့အထူးတလည်ပြင်ဆင်ဖို့မလိုတော့ပါဘူး။အမှုန့်ကိုရေနဲ့ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်ပြီးအနေတော်လှီးထားတဲ့ဗူးသီးကိုအနှစ်ထဲမှာလူးပြီး
စာရေးသူ ရှညောသား at Wednesday, June 24, 20152comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, June 20, 20153comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, June 12, 20152comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, June 11, 20153comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, June 07, 20153comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Credit to>>>> You tube
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, June 07, 20150comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဆီကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး :) အဖေနဲ့အမေရှိတဲ့အိမ်ဆီကိုပါ။လာလည်ရင်းနဲ့တောအငွေ့အသက်လေးတွေ
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, June 05, 20150comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook